Izohlonishwa ngosesitayeleni imbokodo kwiNtandokazi Women’s Club | Isolezwe
Izohlonishwa ngosesitayeleni imbokodo kwiNtandokazi Women’s Club
Isolezwe / 2 August 2012, 12:49pm /
Umculi owavelela kuma-Idols uTender Mavundla uzobe ekwiNtandokazi Womens Club
BAZOYIGUBHA ngesitayela inyanga yabo abantu besifazane njengoba umcimbi ohlelwa yiSolezwe, Intandokazi Women’s Club, uzobe unombuthano omkhulu kule nyanga yabo.
Lo mcimbi ozoba sehhotela iKapenta Bay, ePort Shepstone ngo-Agasti 25, uzobe uhambisana nemigubho njengoba iningi labantu besifazane lizobe lithokozela ukuhlonishwa kwalo ngamagalelo elinawo neliwakhombisa ngokwehlukana empilweni yabantu.
Kulo mcimbi okungowesithathu kulo nyaka leli phephandaba eligubha ngawo iminyaka elishumi, owesifazane oyedwa uzohamba ebusisekile futhi engazisoli ngokuza kulo mcimbi ngoba uzohamba nesipho sosofa bakwa-Geen & Richards besikhumba benani lika-R17 000.
Ngokusho kukaNksz Zandile Nembe weSolezwe, ngenxa yesasasa lalo mcimbi, abafuna ukuwuhambela kuhle baphuthume ukubhalisa ngoba seziyashesha ukuphela izikhala.
“Abantu bafona sekuhambe isikhathi ekubeni bebaningi abesifazane abasuka kude abafuna ukuba nathi. Ziningi izipho esinazo abazohamba bezititizele zona ukuze singabantu besifazane sijabule nathi kule nyanga yethu,” kusho uNksz Nembe.
Kulo mcimbi kusuke kuxoxwa ngezinto ezahlukene njengoba kukhona izikhulumi ezivela ezinhlanganweni ezahlukene.
Izikhulumi ezifana noVuyi Gama wakwa-Inecto, aboMnyango wezo-Bulungiswa KwaZulu Natal nabavela ebhange Ithala, bashiya umuntu wesifazane ebona ukubaluleka kwakhe nokomndeni wakhe.
Abebhange Ithala bakhuluma ngezinto ezithinta iphakethe lakho njengoba besuke bekutshela izindlela ezikucijayo ngokuthi ungayonga kanjani imali yakho.
Lo mcimbi okungenwa kuwona ngo-R150 uzoqala ngo-10 ekuseni kanti uhlelo lwawo luzophathwa nguThokozani MaMkhize Ndlovu owake waba ngumsakazi woKhozi FM.
Ubumnandi buzobe bubuzwa kulo mcimbi njengoba intokazi yakhona ePort Shepstone uTender Mavundla owake wangenela umncintiswano wama-Idols ezoqhulula amanoni akhe.
Abafuna imininingwane ngalo mcimbi bangathinta uNksz Zandile Nembe ku-031 308 2552.
Kwabawuxhasile kubalwa iThala, Hallmark, Spekko Rice, Inecto noMnyango wezoBulungiswa.